ECDC - Eden Centre for Disabled Children
ဧဒင်မသန်စွမ်းသက်ငယ်များပြုစုရာရိပ်မြုံ (ဧဒင်ရိပ်မြံု) သည် ၂၀၀၀ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁၈) ရက်နေ့တွင် ဦးထာအုပ် (အကြောအဆစ်ကျွမ်းကျင်သူ) နှင့် ဒေါ်လီလီယံကြီး (အထူးပညာရေးဆရာမနှင့် မသန်စွမ်းသက်ငယ်ကျောင်းအုပ်၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန) တို့မှ ကိုယ်အင်္ဂါနှင့် ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းကလေးများ၏ လိုအပ်နေသော ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ အထူးပညာရေးနှင့် လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါ သည်။ အမြတ်အစွန်း ရရှိရန်အတွက် မဟုတ်သည့်၊ အရပ်ဖက်ဆိုင်ရာ အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
မျှော်မှန်းချက်၊ တာဝန်များနှင့် တန်ဖိုးထားသောအချက်များ
မသန်စွမ်းသူများ၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ၊ အခွင့်အရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တို့ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် သူတို့တွင် ရှိနေသော အလားအလာများကို အပြည့်အဝရရှိရမည်။ ဧဒင်ရိပ်မြံုသည် မေတ္တာလွှမ်းမိုးသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင် ခွဲခြား ဆက်ဆံမှုကင်းပြီး အခြားသူများနည်းတူ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိကာ ပျော်ရွှင်သောဘဝကို ရရှိခံစားနေနိုင်သည့် မြန်မာ ပြည်၏ နေရာတစ်ခုဖြစ်ရမည်။…
မည်သို့စတင်ခဲ့ပါသလဲ။ မိခင်မြန်မာပြည်သို့ပြန်ပြီး မသန်စွမ်းကလေးများအတွက် ကောင်းသောအရာတစ်ခုခု လုပ်ပေးလိုသော ဆန္ဒသည် ဧဒင်ရိပ်မြုံထူထောင်သူ ဦးထားအုပ်၏ စိတ်ထဲတွင် နဂိုကတည်းက ကိန်းအောင်းနေခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၅-၉၆ ခုနှစ် များတွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ပီနန်ရှိ Spastic Children Association of Penang, Malaysia တွင် အကြောအဆစ် ကုပညာရှင် (Physiotherapist) အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်က ပီနန်ရှိ Eden Handicap Service Centre (EHSC) တွင် အလုပ်ချိန်ပြင်ပ၌ တစ်ပတ်နှစ်ခါ လုပ်အားပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စင်္ကာပူရှိ သို့ပြောင်းရွှေ့ပြီး နောက်ထပ် (၂) နှစ် အကြောအဆစ်ကုပညာရှင်အဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် မိခင်မြန်မာနိုင်ငံသို့ အပြီးပြန်လာခဲ့ပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြုံဖွံ့ဖြိုးလာပုံ မသန်စွမ်းကလေး (၁၄) ဦးတို့အား တစ်နှစ်ကျော်ကြာ သူတို့နေအိမ်တွင် လိုအပ်နေသော လေ့ကျင့်ခန်းဝန်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးပြီးနောက် မိတ်ဆွေများ၏ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့် တစ်ပတ်လျှင် (၂) ရက် ကလေးများကိုခေါ်ပြီး ဆရာမကြီး ဒေါ်လီလီယံကြီးနေအိမ်တွင် ၂၀၀၀ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁၈) ရက်နေ့တွင် ဧဒင်ရိပ်မြုံကို စတင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနေရာတွင် လေးလခန့် လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် ဧဒင်ရိပ်မြုံ၏ အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်လူကြီးတစ်ဦး၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် အခန်းတစ်ခုကို အမှတ် ၁၃ (က) ဒေါ်လှပန်းလမ်း၊ အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင် ငှားရမ်းခဲ့ပါ သည်။… Read more >>
by User2| Jul 6, 2015 | Current News |0Comments
ဧဒင်မသန်စွမ်းသက်ငယ်များပြုစုရာရိပ်မြုံ၊ ပရဟိတလုပ်ငန်းမှ အောက်ဖော်ပြပါ ၀န်ထမ်းရာထူးအတွက် လျှောက်လွှာ အမြန်ခေါ်ယူလျှက် ရှိပါသည်။ ၁။ ယာဉ်မောင်း - ၁ ဦး နေရာ - စီမံဌါန၊ ဧဒင်ရိပ်မြုံ လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ - ပညာအရည်အချင်းအနည်းဆုံး အထက်တန်းအဆင့်...
by User2| May 12, 2015 | Current News |0Comments
ဧဒင်မသန်စွမ်းသက်ငယ်များပြုစုရာရိပ်မြုံ၊ ပရဟိတလုပ်ငန်းမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော လူတိုင်းအကျုံးဝင် ပညာရေး စီမံကိန်းတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ၀န်ထမ်းရာထူးအတွက် အမြန်လျှောက်လွှာ ခေါ်ယူလျှက် ရှိပါသည်။ ၁။ ကွင်းဆင်းဝန်ထမ်း - ၃ ဦး နေရာ - လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးစီမံကိန်း...
by User2| May 8, 2015 | Current News |0Comments
မိခင်များနေ့ အခမ်းအနား နှင့် ဧဒင်ရိပ်မြုံ ၁၅နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည် (မွေးနေ့) အခမ်းအနားကို ယနေ့ (၈/၅/၁၅) ညနေ ၄ တွင် ဧဒင်ရိပ်မြံုရိပ်မြံု - Rehab ခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ မိခင်များနေ့ အခမ်းအနားကို ဧဒင်ရိပ်မြံု၏ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်လီလီယံကြီးအား မိခင်များနေ့တွင် ဂုဏ်ပြုလို၍...
Celebrated Int'l Day of Disability ceremony
by User 1 | Jan 28, 2015 | Current News |0Comments
Eden centre celebrated International Day of Disability ceremony for the disabled children in Dandawgyi park on 3rd December, 2008. The centre also celebrated Christmas Eve ceremony on 23rd December, 2008. Myanmar physically handicap association organized disabled...
Completion of 'Disability Studies Certificate Course'
by User2| Jan 8, 2015 | Current News |0Comments
On 17th September 2011 the third ‘Disability Studies Certificate Course’ was successfully finished.
The duration of the course is 20 weeks, 60 hours.
by User2| Jan 6, 2015 | Current News |0Comments
Eden centre celebrated International Day of Disability ceremony for the disabled children in Dandawgyi park on 3rd December, 2008.